प्रधानमन्त्रीद्वारा अध्यादेश स्वीकृत गर्न राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण | eAdarsha.com
काठमाडौं, २३ पुस। प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारले सिफारिस गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अध्यादेश स्वीकृत गर्न राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनमा भएको ढिलाइका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आलोचना सुरु गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले अध्यादेश पारित गरेर आयोग गठनको बाटो खोलिदिन आग्रह गरेका हुन्। सरकार आयोग गठन गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै कानुनी बाटो खोलिदिन प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले द्वन्द्वकालमा दुवै पक्षबाट भएका कमी कमजोरीको दीर्घकालीन समाधानका लागि आयोग गठनबारे छलफल भएको बताए। संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि लगिएको अध्यादेश पारित गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले ध्यानाकर्षण गराएको उनका सहयोगीहरूले जानकारी दिए। जवाफमा राष्ट्रपतिले दलीय सहमति गरेर आएका अध्यादेश स्वीकृत गर्ने बताएका थिए। भेटका अवसरमा राष्ट्रपति यादवले सुडान मिसनमा खटिएका नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ परेकोबारे चासो राखेका थिए। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका विषयमा समेत छलफल भएको थियो। दलहरूबीच सहमतीय सरकार गठनमा भएको ढिलाइले वैशाखमा गर्ने भनिएको निर्वाचन अनिश्चित बन्दै गएको भन्दै राष्ट्रपतिले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने प्याकेजमा सहमति गरेर वा स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने अडान राखेका थिए। यसअघि राष्ट्रपति यादवले सोमबार साना दलका नेताहरूसँग सहमति नहुनुको प्रमुख दोषी मुख्य तीन राजनीतिक दल भएको बताएका थिए।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच तत्कालको मन्त्रिपरिषद् विघठन गरेर भट्टराईकै नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठन गर्नेबारे छलफल भएको छ। दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि यही सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको बनाएर भएपनि निर्वाचन सुनिश्चित गर्नुपर्ने निष्कर्षमा राष्ट्रपति पुगेको स्रोतको दाबी छ। ‘मन्त्रिपरिषद् विघठन गरेर भट्टराईकै नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठन गर्नेबारे छलफल सुरु भएको छ’-शीतल निवास निकट स्रोतले भन्यो।
राष्ट्रपतिद्वारा साना दलसँग परामर्श सुरु
मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिन प्रमुख दल असफल भएपछि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका साना दलसँग परामर्श सुरु गरेका छन्। यस क्रममा राष्ट्रपति यादवले सोमबार राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टीनेपालका अध्यक्ष कमल थापासँग भेट गरी गतिरोध अन्त्यका विषयमा छलफल गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा अपरान्ह भएको भेटमा अध्यक्ष थापाले गतिरोधको निकासका लागि प्रमुख दल असक्षम भइसकेका कारण सर्वपक्षीय छलफलबाट निकास खोज्न सुझाव दिए। संसद् नभएको अवस्थामा सबै दलको समान अस्थित्व रहेकाले सर्वपक्षीय सहमतिमा निकास खोज्न आग्रह गरेको अध्यक्ष थापाले बताए। ‘राष्ट्रपतिले ठूला दलसँग मात्रै छलफल गरेर देशले निकास पाउँदैन’-उनले भने-’सवै दलसँग परामर्श गरेर साझा निकास दिनुपर्छ।’ ताजा जनादेशले मात्र निकास दिने भन्दै अध्यक्ष थापाले संविधानसभा पुनस्र्थापनाको विकल्प स्वीकार नगर्न राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यसअघि राष्ट्रपति यादवले आइतबार राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, माले महासचिव सीपी मैनाली र नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष चन्द्रदेव जोशीसँग परामर्श गरेका थिए।